Addressing reporters Sunday foreign minister Sibusiso Moyo said President Emmerson Mnangagwa’s government regretted security forces’ descending heavily opposition protestors (1 August, 2018) who were calling on the Zimbabwe Electoral Commission and used l
Vamwe vanhu vanoti panofanirwa kuve nemitemo yakajeka yekuti vatapi venhau vanotadza kuita basa ravo vanorangwa sei.
Izvi zvabuda pamusangano wekunzwa mafungiro everuzhinji pamusoro peZimbabwe Media Commission Bill waitwa muBulawayo nekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko.
Segaroziva, vatori venhau vapinda mumusangano uyu vati vanoda kuti bhiri reZimbabwe Media Commission ribudise pachena kuti vatapi venhau havafanirwe kusungwa apo vanenge vatadza kuita basa ravo nemazvo.
Asi mumwe mugari, VaNgonidzashe Kodoke, vati kune vamwe vatori venhau vanoresva kuita basa ravo nekuzviitisa, vakati zvakakosha kuti pave nemutemo unobudisa pachena kuti vanoita izvi vanorangwa sei.
Mutori wenhau, Admire Kudita, ati anoshushikana nekuti masangano akasiyana siyana anomirira vatapi venhau akapa pfungwa dzawo kare kugurukota rezvekufambiswa kwemashoko, asi bhiri iri hariburitse izvi.
Murongi wemabasa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe, VaNigel Nyamutumbu, vatsinhira maonero ekuti zvakakosha kuti vatori venhau vakwanise kuzviongorora pachavo vega pasina kupindira kwemapurisa.
Nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko, VaSettlement Chikwinya, vati vari kufara nemafambiro ari kuita hurongwa hwekunzwa kubva kune veruzhinji.
Zimbabwe Media CommissionBill ndemumwe yemitemo mitatu inovandudza mutemo weAIPPA inosanganisira Freedom of Information Bill neData Protection Bill.
MaMedical Aid Oramba Kushanda Zvoomesera Varwere
South Africa Yozeya Nzira dzeKuti Zimbabwe Yobuda Sei Mukanwa Mamupere
Apex Council Inoti Hurumende Ichabhadhara Vashandi Vose Bhonasi Mwedzi Uno
VaMnangagwa Vanobatana neVamwe Vatungamiri kuMusangano weGlobal Business Forum Africa